Wararkii ugu dambeeyay xaaladda Gaalkacyo iyo sida ay saakay ku waabariisatay magaaladaas – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Wararkii ugu dambeeyay xaaladda Gaalkacyo iyo sida ay saakay ku waabariisatay magaaladaas
Wararkii ugu dambeeyay ee saakay laga helaayo magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug ayaa sheegaya inay xaaladda magaaladaasi tahay mid aad u degan, inkastoo ay weli jirto xiisad colaadeed oo u dhaxeeysa ciidamada kala taabacsan maamulada Galmudug iyo Puntland.
Ciidamada Galmudug iyo Puntland oo maalintii shalay ku dagaalamay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug, ayaa waxay dagaalkaasi isku adeegsadeen hubka noocyadiisa kala duwan.
Inta la xaqiijiyay waxaa dagaalkii shalay ku geeriyootay ku dhawaad 30 qof oo la sheegay inay isugu jiraan dad shacab ah iyo ciidanka labada dhinac ee dagaalamay, iyadoona sidoo kale ay ku dhaawacantay tiro intaasi ka badan.
Dhinaca kale, dagaalkaan ayaa imaanaya xilli dhawaan madaxweynayaasha maamulada Puntland iyo Galmudug ay si wadajir ah usoo saareen war-murtiyeed dib u heshiisiin ah oo dhowr qodob ka kooban, kadib markii ay ku kulmeen magaalada Abuu Dhabi ee dalka Isku-taga Imaaraadka Carabka.
Inkastoo qodobada ku qornaa war-murtiyeedkaasi ay haatan u muuqdaan mid fashilmay, ayaa hadane waxaa weli baaqyo isdaba-joog ah ay kasoo baxayaan dowladda federaalka Soomaaliya, beesha caalamka iyo waxgaradka gobolka Mudug, kuwaas oo ay ku baaqaya in la dhaqan geliyo heshiiskaas lagu gaaray dalka Isku-taga Imaaraadka Carabta ah.